musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » Vanhu vana vakaurayiwa, 19 vakakuvara mudutu reIstanbul
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau
Sekureva kwehofisi yagavhuna weIstanbul, dutu guru rakarova guta reTurkey nemusi weMuvhuro, rikauraya vanhu vana uye kukuvadza zvakaipisisa vanosvika gumi nevapfumbamwe.
“Tiri kunamatira nyasha dzaMwari kune avo vakarasikirwa neupenyu, kutumira mashoko enyaradzo kuhama dzavo, uye tichishuvira kuti vanenge vakuvara apore nekuchimbidza,” vanodaro.
Mumwe mugari wekune dzimwe nyika uye vagari vatatu veTurkey vakaurayiwa nedutu remhepo, nepo vatatu vevane gumi nevapfumbamwe vakakuvara vachiri muchipatara mune zvakakomba, zviremera zvenzvimbo zvakazivisa.
Istanbul yave ichirwisana nemamiriro ekunze akashata kubva mumaawa ekutanga eMuvhuro, nevezvenhau vakazara nemavhidhiyo anotyisa ematenga ematenga akacheneswa nemhepo, zvivakwa zvakapwanyika, miti yakadonha, mota dzakapidiguka, uye marara ari kubhururuka.
Iyo Bosphorus strait yakavharwa kune maritime traffic uye ferry masevhisi akamiswa.
Dutu iri rakakonzerawo kudzimwa kwendege dzinoverengeka dzeIstanbul.
Ndege hadzigone kumhara pairi Istanbul Airport, uye vari kuendeswazve kuAnkara neIzmir.
Mishumo yekukuvara yakauyawo kubva kune mamwe matunhu enyika, uye yambiro yemadutu ichiripo neChipiri.